गुगलवि’रुद्ध अमेरिकी सरकारले हाल्यो मु’द्धा, के हो प्र’करण ? – Halkhabar kura
५ कार्तिक २०७७, बुधबार १०:१९
गुगलवि’रुद्ध अमेरिकी सरकारले हाल्यो मु’द्धा, के हो प्र’करण ?
काठमाडौँ । अमेरिकी सरकारले गुगलवि’रुद्ध मु’द्धा दा’यर गरेको छ । गुगलले सर्च र अनलाइन विज्ञापनमा एकाधिकार गर्दै कानुन तो’डेको आ’रोप लगाइएको छ ।
एक बर्षभन्दा लामो समयसम्म गरिएको अ’नुसन्धान र अध्ययनपछि अमेरिका र अमेरिका बाहिर गुगलले सर्च र अनलाइन विज्ञापनमा कानुन तो’डेर एकाधिकार जमाएको आ’रोपको मु’द्दा दायर गरिएको हो । फेडरल अ’दालतमा दा’यर गरिएको मु’द्दा अमेरिकाको का’नुन मन्त्रालय र ११ राज्यहरुले दा’यर गरेको सिएनएनले जनाएको छ ।
मु’द्धामा गुगलले हरेक बर्ष डिभाइस निर्माता कम्पनिहरु एप्पल, एलजी, मोटोरोला तथा सामसंग जस्ता कम्पनिलाई डिफल्ट रुपमा आफ्ना डिभाइसमा गुगलको सर्च इ’न्जिन आउने बनाउन दिएको रकमको बारेमा समेत उल्लेख गरिएको छ । साथै इन्टरनेट ब्राउजर कम्पनि मोजिला, ओपेरा जस्ता कम्पनीलाई पनि गुगलले रकम दिने गरेको बताइएको छ । जसबाट गुगलले इन्टरनेटको सर्च वितरणमा ८० प्रतिशत बजार ओगेटेको बताइएको छ ।
गुगलले भने सो आरोप अ’स्वीकार गर्दै गुगलका ग्लोबल अफ्येर्स तथा प्रमुख कानुन अधिकृत केन्ट वाल्करले भनेका छन्, ‘मानिसहरुले गुगल यस कारण प्रयोग गर्छन्, की उनीहरुसँग विकल्प छैन, नकी उनीहरुलाई हामीले ज’बर्ज’स्ती हेर्न भनेका छौं ।’
साथै गुगलले एप्पल जस्ता कम्पनिलाई गुगललाई उसका डिभाइसमा बाइ डिफल्ट बनाउन दिने गरेको रकम सामान्य विजनेस अभ्यास भएको बताएको छ । यो आफ्नो उत्पादनको प्रमोशन गरेको जस्तै भएको गुगलले बताएको छ ।
गुगलको बर्षमात्र उसको कुल आम्दानीको ८४ प्रतिशत अर्थात १३४.८ बिलियन डलर विज्ञापनबाट आउने गर्दछ । गुगललाई युरोपमा पनि यस्तै आ’रोप लगाउदै मिलियन डलर ज’रिवाना लगाइएको थियो, जसलाई गुगलले अ’पिल गरिरहेको छ ।
Previous काठमाडौंमा वर्षकै उच्च गर्मी
Next पुरुषका लागि बन्यो गर्भनिरोधक सुई, एक पटक लगाए १५ वर्ष बच्चा नहुने